Update: (( အထူးကုန်စည်(၁၆)မျိုးဆိုသည်မှာ (၁)စီးကရက်အမျိုးမျိုး၊ (၂)ဆေးရွက်ကြီး၊ (၃) ဗာဂျီး နီးယားပေါင်းတင်ဆေး၊(၄)ဆေးပေါ့လိပ်၊ (၅)ဆေးပြင်းလိပ်၊ (၆)ဆေးတံသောက်ဆေး၊ (၇) ကွမ်းစားဆေးအမျိုးမျိုး၊ (၈)အရက်အမျိုးမျိုး၊ (၉) ဘီယာအမျိုးမျိုး၊ (၁ဝ) ဝိုင်အမျိုး မျိုး၊ (၁၁) ကျွန်းသစ်မာသစ်လုံးနှင့် အခြေခံအဆင့်သာခွဲစိတ် ထားသော သစ်ခွဲသားများ၊ (၁၂) ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီိလာ၊ မြ၊ စိန်နှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာအရိုင်းထည်များ၊ (၁၃) ထိုအဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ၊ (၁၄) Double Cup4Door Pick up မှအပ ၁၈ဝဝ. cc အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate wagon)ကားများ၊ ကူပေး(coupe) ကားများ၊ (၁၅) ရေနံဆီ၊ ဓာတ် ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီ၊ (၁၆) သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တို့ ဖြစ်သည်။ )))
Update: (( အထူးကုနျစညျ(၁၆)မြိုးဆိုသညျမှာ (၁)စီးကရကျအမြိုးမြိုး၊ (၂)ဆေးရှကျကွီး၊ (၃) ဗာဂြီး နီးယားပေါငျးတငျဆေး၊(၄)ဆေးပေါ့လိပျ၊ (၅)ဆေးပွငျးလိပျ၊ (၆)ဆေးတံသောကျဆေး၊ (၇) ကှမျးစားဆေးအမြိုးမြိုး၊ (၈)အရကျအမြိုးမြိုး၊ (၉) ဘီယာအမြိုးမြိုး၊ (၁ဝ) ဝိုငျအမြိုး မြိုး၊ (၁၁) ကြှနျးသဈမာသဈလုံးနှငျ့ အခွခေံအဆငျ့သာခှဲစိတျ ထားသော သဈခှဲသားမြား၊ (၁၂) ကြောကျစိမျး၊ ပတ်တမွား၊ နီလာ၊ မွ၊ စိနျနှငျ့ အခွားအဖိုးတနျကြောကျမကျြရတနာအရိုငျးထညျမြား၊ (၁၃) ထိုအဖိုးတနျကြောကျမကျြရတနာ အခြောထညျမြားနှငျ့ လကျဝတျရတနာမြား၊ (၁၄) Double Cup4Door Pick up မှအပ ၁၈ဝဝ. cc အထကျ ဗငျကားမြား၊ ဆလှနျး၊ ဆီဒငျနှငျ့ ဝကျဂှနျ (Estate wagon)ကားမြား၊ ကူပေး(coupe) ကားမြား၊ (၁၅) ရနေံဆီ၊ ဓာတျ ဆီ၊ ဒီဇယျဆီ၊ ဂကျြလယောဉျဆီ၊ (၁၆) သဘာဝဓာတျငှေ့ တို့ ဖွဈသညျ။ )))